လူကြိုက်အများဆုံး ဂိမ်းဇာတ်ကောင်များ (၁)
Games. Uploaded 11 months ago
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်တွေနဲပါတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကောင်ရှိသလို ဂိမ်းမှာလဲလူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအမြောက်အများ ရှိလို့နေပါတယ်။ အဲ့ထဲကဇာတ်ကောင်တစ်ချိုု့ကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
၃. Sonic The Hedgehog
Sonic ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင် ၉၀ ပြည့်နှစ်တုန်း ကဝက်ဝက်ကွဲ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်ပါ။ ယခုထက်တိုင်လဲ နာမည်တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ဆဲပါ။ သူစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတောာ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီး Sega Genesis ဆိုတဲ့ ဂိမ်းစက်မှာစတင် ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာ Sonic ကို ကာတွန်းကားတွေပါထုတ်လုပ်ရတဲ့ အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Sonic ဆိုတာနဲ့ အပြေမြန်တဲ့ အပြာရောင်အကောင်လို့ လူတိုင်း ပါစပ်ဖြားမှာ Mario နဲ့ခေတ်ပြိုင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂. Solid Snake
ဒီဘဲ ရဲ့အသက်က ကိုတွေထက်တောင်ကြီးနေပါတယ်။ Snake ဆိုတာနဲ့ Metal Gear Solid ကိုယ်ဂိမ်း အရူးအမူး ကစားသူတိုင်ပြေးမြင်ကြမှာပါ။ သူ့ကိုတော့ ၁၉၈၇ ဇူလိုင်လ မှာကမ္ဘာကျော် ဇာတ်ကောင်တီထွင်သူ Hideo Kojima ကစတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သူစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းစက်ကတော့ MSX လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်မမြင်ဘူးကြပါဘူး။
နင်ဂျာဂိမ်းတွေအားလုံထဲမှာမှ အကောင်းဆုံဇာတ်ကောင်လို့ဆိုရမှာပါ။ Ryu Hayabusa ပာာ နင်ဂျာဂိမ်းတွေကို ဆွဲလမ်းစေ ခဲ့သူကြီးလို့တောင်တင်စားကြပါတယ်။ သူကိုတော့ ၁၉၈၈ မှာစတင်ကာ ဂိမ်မာ တွေနဲ့ထိတွေ့စေခဲ့ တာကတော့ Tecmo ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကပါ။ နောက်ပိုင်ထွက်တဲ့ Ninja Gaiden ဂိမ်းတွေပာာလဲဆော့မိသူတိုင်း ရင်မှာဆွဲစေပါတယ်။
အဖွင့်လှခဲတဲ့ Apex Legends
၂၀၁၉ ဖိလစ်ပိုင် ဆီးဂိမ်း နှင့် E-Sport